Njengoba lungenye yezinto eziyinhloko e umdlalo othandwayo "Maynkraft" kakhulu okusansimbi. Njengoba nobukhulu bayo ubanzi kakhulu, asikwazi ukuhlala kude luhlolo eningiliziwe yalesi material. Ngakho, ake sibheke kuqala ngesikhathi kanjani "Maynkraft" uthole yensimbi kanye kuka kungcono ukwenza.
Ngaphambi kokuya e, "Maynkraft" akhiphe yensimbi, uzodinga ukwenza ukulungiselele. Okudingayo kunoma umdlali "Maynkraft"? Ukudla, ukukhanya, amathuluzi kanye nokuvikelwa. Uma uya ukuhamba phezu kwamanzi kusesho womhume, qiniseka ngiyothatha into amabhlogo wokwakha ambalwa. Akunandaba ukuthi. Vele ngokushesha endle, ukwakha indawo yokukhosela. Ungakwazi ukuletha embhedeni ukudlula ebusuku.
Into yokuqala uzodinga Ipiki futhi lokwela. Zombili lezi amathuluzi phezu Crafting banebhentshi. Ukuze wenze lokhu uzodinga 4 izigxobo zikagesi futhi 4 cobblestone. Okokuqala eniwenzayo ok ibekwe maphakathi ikholomu phansi cobble stick stick. Ngemva kwalokho, khethani - 3 cobblestone indawo, kukholamu maphakathi esiqongweni umugqa banebhentshi - 2 izinti.
Ukuze uhambo olude Thenga ukudla - kungakhathaliseki ukuthi. Pretty kuhambisana kahle kule apula.
Make Me izimbaqa. Ingabe uya phansi womhume ukuhambisa phezu - ukukhanya ndise, futhi ngeke avumele ukuba izilo "eziyizimbangela" emhumeni. Ukuze wenze ithoshi, udinga izinti ne-silicon. Lesi sakamuva ingatholakala ngokumba amatshe, futhi ngezinye enchanted lokwela inhlanhla it is ekhishwe nge 100% okungenzeka. Yenza benezincwadi ezanele phambi ethuthuka ngendlela.
Iron akakaze ezitholakala "Maynkraft" e injalo elicwengekileyo. esigabeni sokuqala ubufakazi bokuba khona kwalesi impahla iba nsimbi. Kanye ezinye izinto, kubalulekile ukuba uthole ngokusebenzisa izibhamu yakho. Lokhu i-ore kutholakala kumephu endaweni ka-2 kuya ku-61 block ukujula. Into engcono kungaba ukuqala looking emihumeni, kodwa ofanele futhi ezivamile yokumba "isitebhisi."
Ngakho, ake sithi usumtholile block emkhandweni wensimbi. Njengoba e "Maynkraft" kukhishwe insimbi, okuyinto ngqo phambi kwakho? Nakanjani, uzodinga pickaxe. Ngaphezu kwalokho, kungcono izinga ngamapiki, ngokushesha lo iyunithi kukhiqizwa. Uma nje waqala ukudlala kangcono ke ngaphambi kokuya obzavedites itshe. Njengoba kukhiqizwa emabhuloki ambalwa wokuqala netshe, kungcono ukubuyela 'ekhaya' kanye aphele i pickaxe yensimbi. ukukhiqizwa Izinga kuzokhulisa kakhulu.
Akukho lutho olungcono kuka abajikelezayo. Umhlaba "Maynkrafta" omkhulu, ngakho kuyodingeka ngenkuthalo ukuhlola kumephu, adlala. Ungaluthola kuphi yensimbi e "Maynkraft" kodwa emihumeni? Kungatholakala kubhalwe emathempelini zemvelo emahlathini kanye ezingwadule, kanye uhlelo inqaba esishiywe dengwane. Uma wena lucky kakhulu, ungathola yensimbi ngesimo iconsi nge Zombies nensimbi golems.
Nokho, bambalwa ukwazi indlela "Maynkraft" kukhishwe insimbi. Ngesimo netshe, kwaba ezinenani elincane, udinga uyiphatha phambi ingasetshenziswa ekubumbeni.
Ake sithi wena bakwazi ukuthola nensimbi misela. "Maynkraft" inikeza uhlu olubanzi lwezinhlelo zokusebenza kwale nto. Ngaphezu kwalokho, cishe izinto main ukuthi wena uyosebenzisa phakathi ukuthuthukiswa ezweni cubic. Nge-nsimbi ngokwawo into ongayenza. Okokuqala udinga ancibilike kube ingots yensimbi kuhhavini.
amaqembu amaningana izifundo bungabonakala, kuncike degree kwabo isidingo in the game. Iqembu lokuqala - alusebenzise. Lena zonke izinhlobo zempi, izikhali kanye namathuluzi. Uma uyingane yokutholwa ngaphezulu kungenzeka ivinjelwe, futhi njengoba kwenziwa e-ubudala, khona-ke, isibonelo, ngaphandle pickaxe yensimbi, ngeke bakwazi ukukhipha igolide emkhandweni wensimbi.
Iqembu lesibili - izinto engasetshenziswa ukuze kwakhiwe umhlaba. Ungakwazi ancibilike imigoqo yensimbi iminyango, kubhaklazeka, uthango komzila kanye nezinye izinto eziningi. Funda ezweni cubic kanye ukuthola izindlela ezintsha! Ngikufisela inhlahla!
"Gothic 3": ukuhamba